SAS 2022 Mmegide Agenda ▷ mee ka emelitere ha Ebe a! | Nhazi na ọmụmụ ihe
El Ọrụ Ahụike Andalusia (SAS) akpọwo ngụkọta nke ebe 4.425 maka ọnọdụ dị na ngbanwe n'efu. Mana ha echefughi nkwalite nke ime, nwere ebe 337 ọzọ. A ga-ekesasịa ha niile ihe karịrị iri atọ na atọ, n'etiti ha bụ Ophthalmology, Oncology, Pediatrics ma ọ bụ Plastic Surgery, n'etiti ndị ọzọ. Nakwa maka ndị ọrụ nhazi, ndị ga-enwe ihe karịrị ọrụ 33, ndị na-esi nri na 200 na ndị ọrụ mmekọrịta mmadụ na 109.
SAS na-emegide agendas
N’okpuru ị ga-ahụ agendas niile emelitere iji gosipụta onwe gị n’ọnọdụ niile nke Ọrụ Ahụike Andalusian na ndị mmegide SAS:
Nọọsụ onye enyemaka
Ndi na asa-akwa na ide akwa
Onye ọkachamara ọkachamara na Radiodiagnosis
Ọgwụ na-ere ọgwụ
Etu esi debanye aha maka asọmpi SAS
Enwere ike ịrịọ arịrịọ ka ị nwee ike ịdebanye aha maka ndị mmegide SAS, yana ịkwụ ụgwọ otu ihe ahụ site na telematics. Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị ọsọ, mana ị nwekwara nhọrọ e biri ebi.
Ọ bụrụ n'ịhọrọ nhọrọ mbụ, ị ga-emerịrị arịrịọ gị maka isonye na weebụsaịtị nke Board Andalusian na nke na-esote adreesị ozi ịntanetị, Na-ejuputa n'ụdị eletrọniki kwekọrọ.
Agbanyeghị na ịmara nke ahụ iji rịọ arịrịọ n'ụzọ dị otu a, anyị ga-achọ mbinye aka dijitalụ.
Ozugbo emere arịrịọ ahụ, ibe ahụ ga-eduga anyị na 'ikpo okwu ịkwụ ụgwọ'. Ndị niile nwere ogo nkwarụ ruru ma ọ bụ karịa karịa 33% anaghị akwụ ụgwọ a kwuru.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ maka biri ebi, ọ gaghị adị oke mgbagwoju anya ma. Mgbe anyị enweghị mbinye aka dijitalụ, ọ bụ nhọrọ anyị hapụrụ.
Ọzọkwa anyị ga-aga na peeji nke ọrụ ahụike Andalus. Ozugbo anyị ruru, anyị ga-edebanye aha.
Mgbe ahụ, anyị ga-ekpuchi data nkeonwe niile achọrọ.
Ozugbo ekpuchichara anyị, a ga-eziga anyị ozi email na nkwenye ahụ.
Site n'ebe ahụ, anyị ga-agbaso arịrịọ anyị, na-egosi ntụgharị nke anyị pụtara, mpaghara, wdg.
Ozugbo ekpuchichara ihe niile, a ga-emepụta akwụkwọ. Yabụ, na anyị ga-echedo mgbanwe niile anyị meburu ma n’ikpeazụ, bipụta ya. N'ime ya anyị ga-ahụkwa ọnụego kwekọrọ na euro 42,67.
Cheta na ị ghaghi ijide n'aka na ekpuchichara data na ubi niile, iji zere njehie.
N'otu oge bipụtara akwụkwọ ahụ, ị ga- abịanye aka na akwụkwọ niile.
Jiri mpempe ego ịkwụ ụgwọ, anyị ga-aga n'ụlọọrụ ahụ itinye ego ahụ. Offọdụ n'ime ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ime Mee ugwo Ha bụ: La Caixa, BBVA, Banco Santander, Unicaja, Cajasol, Bankia, wdg.
N'ikpeazụ, anyị na-etinye akwụkwọ niile ahụ na envelopu, dị ka akwụkwọ nke ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ, ngwa na akwụkwọ ndị ọzọ ma achọrọ. Anyị ga-eburu envelopu a na Central Services nke Andalusian Health Service, yana Hosplọọgwụ nke Andalusian Health Service ma ọ bụ na Post Office.
Ọnọdụ ndị a ga-ahọrọ na ndị mmegide SAS
Onye Enyemaka Nke Onye Nchịkwa: Ọnọdụ onye nlekọta nchịkwa na Andalusian Health Service na-ahụ maka nhọpụta na nyocha, yana nkwadebe nke ụfọdụ akụkọ. Ala nke inyeaka ga-adị ihe dị ka euro 1300. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ego a kapịrị ọnụ, n'ihi ịkwụ ụgwọ na mgbakwunye ndị ọzọ.
Nọọsụ onye enyemaka: Ọnọdụ a nwekwara ụgwọ ọnwa nke ga-adị ihe dị ka euro 1320. Dị ka iwu n'ozuzu, ndị enyemaka ahụ na-ahụ maka ihicha yana idozi ebe ọrụ, ilekọta ndị ọrịa, ịhazi akwa ma ọ bụ soro ndị ọrịa, yana ikesa nri, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndị nche: Ọrụ ndị a na-arụ n'usoro dị ọtụtụ. N'ime ha na-ebugharị ma ihe ma ndị ọrịa. Ha ga-enyere ndị nọọsụ aka, tinye ma wepu wedges ma nye aka na ụfọdụ ọrụ nhicha, ma ọ bụrụ na achọrọ. Ya ụgwọ ọnwa bụ gburugburu 1200 euro.
Nọọsụ: Ilekọta bụ otu n'ime isi ọrụ nke ndị nọọsụ niile. Ha na-adụ ndị ọrịa ọdụ ma na-enyocha ha, mgbe ha na-eme mkpebi gbasara ha. Enwere ike ịsị na ọ bụ ụdị onye enyemaka nye dọkịta, onye nyefere ndị ọrụ nọọsụ ọtụtụ ọrụ. Icinggụ ọgwụgwọ na inyere ndị ọrịa aka bụkwa ọrụ ndị ọzọ dị mkpa. Salarygwọ ụgwọ ya karịrị euro 2000.
Nkụzi ahụike: Ha na-ahụ maka ịgwọ ọgwụgwọ na ịnye usoro ọgwụgwọ na-abụghị ọgwụ iji gbochie ọtụtụ ọrịa. Gwọ ọrụ nke ndị na-ahụ maka ahụ ike bụ ihe dị ka euro 1900.
Ndi na asa-akwa na ide akwa: Thegwọ nke ndị na-asa akwa na ndị na-afụ ụfụ dị ihe dị ka euro 1000. Dịka anyị gosipụtara na mbụ, ọ nwere ike ịdị iche na-adabere n'ụgwọ ịkwụ ụgwọ na ihe mkpali ndị ọzọ. Dị ka aha ha na-egosi, ha na-ahụ maka ihicha àkwà na idozi ha.
Matron: Midwife ma ọ bụ midwife bụ onye na-enye ndụmọdụ na ndụ dị iche iche. Ma na inwe mmekọahụ n'ozuzu ya na n'oge ime ime, ịmụ nwa ma ọ bụ inye nwa ara. Banyere ụgwọ ọnwa, ọ karịrị 2000 euro.
Okpokoro isi: Ugwo oru nke ndi enyemaka bu euro 1200. Ọ ga - abụ onye inyeaka na isi nri, ọ ga - amata mgbe niile ọrụ dị iche iche nke kichin. Ọ ga-ahazi pamanti ahụ, debe usoro niile, ma lekọta anya ọcha.
Onye ọkachamara ọkachamara na rediodinosis: Ọ bụ ha na-ese foto dị n’ahụ iji gbochie ụfọdụ ọrịa. Iji mee nke a, ha na-eji teknụzụ dịtụ mgbagwoju anya dị ka ultrasound ma ọ bụ radieshon magnet na ụzarị ọkụ X. salarygwọ ọnwa ha karịrị euro 1500.
Ọgwụ na-ere ọgwụ: Isi ego eji akwụ ụgwọ nke onye ọrụ ọgwụ bụ euro 1329. A raara ya nye nkwadebe, ya na ichekwa ma obu ikesa ogwu. I nwekwara ike kesaa ha n'ụlọ ọgwụ ma kwadebe ngwaahịa mana na-echekwa ọgwụ ndị ọkachamara mgbe niile.
Dị ka ị maara nke ọma, ọpụrụiche ọ bụla nwere kpọmkwem agbata na ha niile na-adaba na ọzọ nke ga-adịkarị ma ọ bụ ihe ndị a:
Isiokwu 1. Iwu Spanish nke 1978: Higherkpụrụ dị elu na ụkpụrụ na-akpali akpali; Ikike na ọrụ ndị bụ isi; Ikike ichebe ahụike.
Isiokwu 2. Iwu nke nnwere onwe nke Andalusia: Higherkpụrụ ka elu na ebumnuche bụ isi; Ikike ndi mmadu, oru na atumatu ndi mmadu; Ahụ ike; Tù guzobere nke Kwurula Community; Nkọwa nke ụkpụrụ.
Isiokwu 3. Ahụike (I). Iwu 14/1986, nke Eprel 25, General Health: General Principles; Asọmpi nke Nchịkwa Ọha; Organizationtù General nke Ọha Ahụike Ọha. Iwu Ahụike 2/1998, nke June 15, Andalusia: Nzube, ụkpụrụ na oke; Ikike na ọrụ nke ụmụ amaala gbasara ọrụ ahụ ike na Andalusia; Ikike nke ikike na ọrụ. Atụmatụ Ahụike Andalusia: nkwa.
Isiokwu 4. Organizationtù Ahụ Ike (II). Nhazi, nhazi na ike nke Ministry of Health na Andalusian Health Service. Ahụike na Andalusia: Ọdịdị, nhazi na ọrụ nke ọrụ nlekọta isi na Andalusia. Nhazi nke Enyemaka Pụrụ Iche na Andalusia. Nhazi nke Nlekọta Isi. Organizationlọ Ọgwụ Hospital. Ebe Nlekọta Ahụike. Ofga n'ihu na-elekọta n'etiti usoro nlekọta.
Isiokwu 5. Nchedo data. Iwu Organic 15/1999, nke Disemba 13, na Nchedo nke Data Nkeonwe: Nzube, oke nke ntinye na ụkpụrụ; Ikike ndị mmadụ. Spanishlọ ọrụ Spanish maka Nchedo Data.
Isiokwu 6. Mgbochi ihe ize ndụ dị na ọrụ. Iwu 31/1995, nke Nọvemba 8, na Mgbochi Ọrịa Ọrụ: Ikike na ọrụ; Ndị ndụmọdụ na ikere òkè nke ndị ọrụ. Nhazi nke mgbochi ihe ize ndụ nke ọrụ na Andalusian Health Service: Ngalaba Mgbochi na thelọ Ọrụ Enyemaka nke Andalusian Health Service. Ijikwa nke ndu bekee. Hygidị ọcha aka. Ọnọdụ. Ihe ngosi data gosipụtara. Oghere na mberede. Mwakpo na ndị ọkachamara. Nchịkwa nke ọnọdụ ndị na-emegiderịta onwe ha.
Isiokwu 7. Iwu 12/2007, nke Nọvemba 26, na Nkwalite Gha Nhata na Andalusia: Nzube; Mpaghara ngwa; Principleskpụrụ izugbe; Amụma ọha na eze maka ịkwalite ịha nhatanha nwoke na nwanyị. Iwu 13/2007, nke Nọvemba 26, na Mgbochi na Nchedo Zuru Oke megide Ime Ihe Ike Nwoke: Nzube; Mpaghara ngwa; Kpụrụ nduzi; Ọzụzụ maka ndị ọkachamara ahụike.
Isiokwu 8. Usoro iwu nke ndị ọrụ. Usoro nke enweghị ike nke ndị ọrụ na ọrụ nke Nchịkwa Ọha. Iwu 55/2003, nke Disemba 16, Framework Statut of Statutory Personnel of Health Services: Nhazi nke ndị ọrụ iwu; Ikike na ọrụ; Nnweta na ọnwụ nke ọnọdụ nke ndị ọrụ iwu na-adịgide adịgide; Inye ebe, nhọrọ na nkwalite dị n'ime; Ndị ọrụ na-agagharị agagharị; Ọrụ; Gwọ Ọrụ; Bọchị ọrụ, ikike na ikikere; Ọnọdụ Ndị Ọrụ Iwu; Usoro ịdọ aka ná ntị; Ikike nnochite anya, ikere òkè na nkwekọrịta ọnụ.
Isiokwu 9. Nnwere onwe nke onye ọrịa na ikike na ọrụ gbasara ozi na akwụkwọ nlekọta ahụike. Iwu 41/2002, nke Nọvemba 14, bụ isi na-achịkwa Autonomy of Patient and Rights and Obligations in Matter of Information and Clinical Documentation: Ikike gbasara ahụike; Ikike nzuzo; Nkwanye ùgwù maka nnwere onwe nke onye ọrịa; Akụkọ ahụike. Nkwenye mara ọkwa. Kaadị ahụike.
Iji nwee ike ịhọrọ nke a kapịrị ọnụ, anyị na-ahapụ gị na njikọ a, ebe ị ga-ahụ niile agendas na ị chọrọ na a ngwa ngwa na mfe ụzọ.
nke kacha nta dị afọ iri na isii.
Ndi nwe obodo Spanish na ndi amaala ndi otu ndi European Union.
Nwee ihe nke chọrọ aha na ntọala ụfọdụ nke oku ọ bụla, dabere na ọnọdụ anyị ga-abanye.
Enweghị ụdị ụdị ịdọ aka ná ntị ọ bụla n'ime ọrụ nke Ọrụ Ahụike ọ bụla ma ọ bụ nke Nchịkwa Ọha.
Enweghi ikpe ikpe na ikpe ikpeazụ maka mpụ ọ bụla megide nnwere onwe ma ọ bụ nke gụnyere mwakpo, yana mmegbu.
Mgbe anyị na-ekwu maka ebe nchekwa maka ndị nwere nkwarụ, naanị ndị na-enyocha akwụkwọ nwere nkwarụ ruru ma ọ bụ karịa karịa 33% nwere ike isonye.
Na mgbakwunye na ihe ndị a niile, a ga-atụle iru eru achọrọ maka ọpụrụiche ọ bụla:
Aha nke ndị ọkachamara dị elu (Ọzụzụ ọkachamara nke ogo dị elu nke alaka ọ bụla). Bachelor dị elu ma ọ bụ BUP.
Ule a na-abanye mahadum maka ndị gafere afọ iri abụọ na ise.
Maka Onye Nlekọta Nlekọta:
Nka na ụzụ (Ọkara Ọzụzụ Ndị Ọkara).
Agụmakwụkwọ Secondary Na-amanye.
Ọzụzụ Ndị Ọkachamara Nke Mbụ.
Maka nọọsụ nnyemaaka:
Clinical Assistant Technician Title (First Degree Professional Training, Health Branch).
Onye Nọọsụ Nọọsụ Nọọsụ (Ọgbara Mọdụl Nkuzi 2).
Ọzụzụ ọrụ ọkwa ọkara.
Maka Onye na-eduzi Warden:
Klaasị B na-anya ịnya ụgbọ ala na ikike maka iga njem ụlọ akwụkwọ, njem ndị njem ọha na eze.
Aha nke ndị ọkachamara dị elu (Ọzụzụ ọkachamara nke ogo dị elu nke alaka ọ bụla).
Degree Secondary Professional Training ma ọ bụ otu.
Gụsịrị akwụkwọ na Nọọsụ.
Lomalọma na Nọọsụ.
Maka Nlekọta Ọgwụ Pharmacist:
Nzere bachelọ na ahịa ọgwụ ma ọ bụ nzere bachelọ na ahịa ọgwụ.
Maka Ọkachamara Mpaghara Nhọrọ:
Aha nke ọkachamara na ọpụrụiche nke ezubere iji nweta.
Imegide SAS maka Physiotherapy:
Diploma na Physiotherapy ma ọ bụ Degree na Physiotherapy.
ATS / Onye ọkachamara ruru na Physiotherapy.
Nka na ụzụ engineer:
Nkà na ụzụ Injin Ọrụ Ọrụ ma ọ bụ Degree na Injinia.
Aha nke Ọkachamara na Ọgwụ Obstetric-Gynecological Nwaanyị (Midwife).
Maka Dọkịta Nlekọta Nlekọta Ndị Isi:
Aha nke Ọkachamara na Ahụike na Ezinụlọ na Ọgwụ Obodo.
Maka Ndi na asa-akwa na Ndi na asa-akwa, onye enyemaka nke kichin:
Maka dibia ogwu:
Aha nke Technician na-ere ọgwụ (Ọzụzụ Ọzụzụ nke Ọkara Ọkara, ngalaba ahụike).
Imegide SAS maka Ọkachamara Ọkachamara na Radiodiagnosis:
Aha onye ọkachamara ọkachamara na Radiodiagnosis (Ọzụzụ Ọkachamara nke abụọ, Alaka ahụike).
Isi nke Onye Ọkachamara Na-ahụ Maka Nchọpụta (Mmụta Ọzụzụ Kachasị elu, ezinụlọ ọkachamara ọkachamara).
Ubre University na Nọọsụ.
Ọpụrụiche ọkachamara na Radiology na Electroradiology.
Nzere ntozu iji rụọ ọrụ X-ray maka ebumnuche nyocha nke ndị Nchịkọta Nchedo Nuklia wepụtara
Maka ọkachamara na ọkachamara na Radiotherapy:
Aha nke onye ọkachamara ọkachamara na Radiotherapy (Ọzụzụ Ọzụzụ nke abụọ, ngalaba ahụike).
Aha nke ọkachamara na nkà na ụzụ na Radiotherapy (Ọzụzụ Ọzụzụ nke Ọkwa Dị Elu, ezinụlọ ọkachamara ahụike).
Akwụkwọ ikike nke onye na-ahụ maka ihe redio bụ nke Kọmitii Nchedo Nuklia nyere na ngalaba nke ngwa redio.
Maka Nchịkwa Nchịkwa:
Aha ụlọ ọrụ.
Maka onye nyocha ekwentị:
Onye na-elekọta mmadụ:
Lomalọma na Social Work.
Degree na Ọrụ Social.
Ule ma ọ bụ usoro nhọrọ
Dị ka ọ na-adịkarị n'ọnọdụ ndị a, ule ahụ nwere akụkụ abụọ n'ozuzu. Otu n'ime ha bụ nke ana-akpọ oge mmegide na nke abụọ, nke asọmpi ntozu.
Oke kachasị maka usoro a ga-abụ 100 isi. Ọ ga - ewepu ya ma gụnye ule ndị a:
Na-eme akwukwo ajuju. A ga-enwe ngụkọta nke ajụjụ 103 na ha niile ọtụtụ nhọrọ. Cheta na a ga-echekwa atọ n’ime ha. Oke kachasị ike ga-abụ akara 50.
Akụkụ nke abụọ bụ ajụjụ ọnụ bara uru yana ajụjụ 50, nwekwara ọtụtụ nhọrọ. Lee isiokwu a kapịrị ọnụ nke akụkụ nke anyị na-emegide ya ga-abanye. Ha na-ejikọtakarị esemokwu nke ndụ n'ezie. Oke kachasị na akụkụ a ga-abụ 50 isi.
Maka ndị mmadụ na-ahọrọ ebe a na-edebe maka ndị nwere ọgụgụ isi, ha nwere ule mwepu. Ọ ga-agụnye ịme ajụjụ a na 50 ọtụtụ nhọrọ nhọrọ.
Ikwesiri ịma na azịza ọ bụla ziri ezi ga-eji akara 2 mee ihe, enweghị isi okwu ga-ewepu maka azịza na-ezighi ezi. Iji gafee usoro mmegide, akara enwetara (nchikota nke akara enwetara na akwụkwọ nyocha na usoro ajụjụ ọnụ) ga-eru, opekata mpe, 60% nke akara ahụ.
Ọ bụrụ n ’ịgafe oge mmegide, mgbe ahụ ị ga-eru ihe a na-akpọ asọmpi mgba. Lee akara kachasị anyị nwere ike inweta ga-abụ isi 100. A ga-atụkwasị ndị enwetara na nkebi nke mbụ.
Ugbu a anyị matara isi ihe iji nwee ike igosi gị asọmpi maka Andalusian Health Service (SAS), ọ bụ oge gị, n'ihi na ebe ndị ahụ na-abawanye kwa afọ.